တာချီလိတ်မြို့ ငွေတောင်ဦးကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်၏ သက်တော်(၆၇)နှစ်ပြည့် ၀ိဇာတမွေးနေ့ မင်္ဂလာအလှူပွဲ ဇန်န၀ါရီလ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ်မြို့ ငွေတောင်ဦးကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်၏ သက်တော်(၆၇)နှစ်ပြည့် ၀ိဇာတမွေးနေ့ မင်္ဂလာအလှူပွဲ ဇန်န၀ါရီလ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့ ငွေတောင်ဦးကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက်၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်၏ သက်တော် (၆၇)နှစ်ပြည့် ဝိဇာတမွေးနေ့မင်္ဂလာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် အဆိုပါကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားရုပ်ပွားတော်အဆူ (၂၀၀)ကိုလည်း မဲဖောက်လှူဒါန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငွေတောင်ဦးကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက်၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တဝိရောစန မဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဌာနစရိယ VIPASSANA BHAVANA MCU. Thailand ၏ ဝိဇာတမွေးနေ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂)နာရီအထိ တာချီလိတ်မြို့၊ ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်ရှိ ငွေတောင်ဦးကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆရာတော်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် - Mahachulalongkornrajavidyalaya University မှ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းသော Honarary Doctorate Degree in Vipassana Bhavana Ph.D (Vipassana Bhavana) ဂုဏ်ထူးဆောင် (၀ိပဿနာ) ပါရဂူဘွဲ့အား ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ(၁၅)ရက်နေ့က လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။
ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး၊ တာခြီလိတျမွို့ ငှတေောငျဦးကမ်မဌာနျးကြောငျးတိုကျ၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတျော၏ သကျတျော (၆၇)နှဈပွညျ့ ဝိဇာတမှေးနမေ့င်ျဂလာကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ (၁၁)ရကျနတှေ့ငျ အဆိုပါကြောငျးတိုကျ၌ ကငျြးပမညျဖွဈပွီး ဘုရားရုပျပှားတျောအဆူ (၂၀၀)ကိုလညျး မဲဖောကျလှူဒါနျးပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ငှတေောငျဦးကမ်မဌာနျးကြောငျးတိုကျ၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတျော ဒေါကျတာ ဘဒ်ဒန်တဝိရောစန မဟာဂန်တဝါစက ပဏ်ဍိတ၊ အဂ်ဂမဟာကမ်မဌာနစရိယ VIPASSANA BHAVANA MCU. Thailand၏ ဝိဇာတမှေးနအေ့ား ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ (၁)ရကျနေ့ နံနကျ (၉)နာရီမှ နလေ့ယျ (၁၂)နာရီအထိ တာခြီလိတျမွို့၊ ပုနျးထှနျရပျကှကျရှိ ငှတေောငျဦးကမ်မဌာနျးကြောငျးတိုကျတှငျ ကငျြးပမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ဆရာတျောသညျ ထိုငျးနိုငျငံ မဟာခြူလာလောငျကှနျးတက်ကသိုလျ - Mahachulalongkornrajavidyalaya University မှ ဆကျကပျလှူဒါနျးသော Honarary Doctorate Degree in Vipassana Bhavana Ph.D (Vipassana Bhavana) ဂုဏျထူးဆောငျ (ဝိပဿနာ) ပါရဂူဘှဲ့အား ၂၀၁၆ခုနှဈ မလေ(၁၅)ရကျနကေ့ လကျခံတျောမူခဲ့သညျ။